Logitech Chakwasa ihie, na ime akara gị n'ihu | Esi m mac
Luis Padilla | | Ngwa, ọtụtụ
Ofwa nke ihe ngosi agbanwebeghi obere kemgbe ndi oru ngo batara ma anyi malitere iji PowerPoint ma obu Keynote mee ha. Logitech, akara nke dịrị na ngalaba kọmputa yana igodo ya na oke ya, na-enye anyị ngwa ọrụ ọhụụ iji jikwaa ngosi anyị ma gosipụta ọdịnaya ga-adị mfe ma nwekwuo ike, na-enwe ike ịhapụ oge ochie pointer laser na drọwa. A na-akpọ njikwa dị na Logitech Chakwasa ihie, ọ bụ multiplatform, dakọtara na ọtụtụ ngwa na n'elu BluetoothYou nwere ike ịrịọ maka ihe ndị ọzọ?
Onye ọ bụla nwere nke atọ Apple TV ga-ahụ nnukwu myirịta nke onye njikwa a na nke Apple ngwaọrụ. Mere nke aluminom, dị na ọlaọcha, oghere ntụ na ọlaedo, dị ka Apple's MacBook nso, ọ nwere naanị bọtịnụ atọ ya mere eji ya emeela ka ọ dị mfe karịa ma n'otu oge ahụ ọ na-enye ọtụtụ nhọrọ nhazi. Ọ bụ ezie na ọ bụ Bluetooth, maka ndị chọrọ iji ya na PC na-enweghị Bluetooth, ọ na-etinye ihe nkwụnye ọkụ nke ị nwere ike jikọọ ya na kọmputa. A na-echekwa ihe nkwụnye USB ahụ na njikwa ntanetị n'onwe ya, yabụ na ị gaghị atụfu ya.
Logitech ahọrọlarị itinye USB-C na ngwa ọhụrụ ya, ọ bụ ezie na eriri nkwụnye ọ na-eweta nwere USB dị na njedebe nke ọzọ, ị nwere ike iji eriri USB nke MacBook maka njikwa ntanetị. Igwe na-achịkwa anaghị arụ ọrụ na batrị, mana a na-agbanyeghachi ya site na iji eriri ọ na-eweta, ma nwee ọtụtụ ihe ruru ọnwa 3, n'agbanyeghị na nke ahụ ga-adị iche na ojiji e nyere ya. Agbanyeghị, Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị na enweghị batrị, ị kwesịrị ịma na otu nkeji ịkwụ ụgwọ na-enye gị ihe ruru 1 awa nke nnwere onwe, karịa karịa maka ngosi.
Kedu ihe ị ga - eme site na Logitech Chakwasa ihie? O doro anya na ị nwere ike ịgbanye ihe nkiri slide ahụ ma laghachi, mana ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ị nwekwara ike ịkọwapụta ọdịnaya site na ịkọwapụta ya ndụ, ma ọ bụ ọbụna mbugharị na mpaghara ụfọdụ, na ihe niile a na mmegharị ahụ dị mfe na njikwa njikwa, na-atụ aka na nkwupụta gị na n’enweghị ịbịaru kọmputa gị n’efu. Nwere ike ịmalite ịkpọ vidiyo, mepee njikọ na weebụsaịtị ma ọ bụ jikwaa olu nke ngosi.
Iji nwee ike ịnweta ọrụ ndị a, ihe ị ga - eme bụ ibudata ngwa na - akwụghị ụgwọ na weebụ de Logitech ma wụnye ya na kọmputa Windows ma ọ bụ macOS gị. Iji mata otu o si arụ ọrụ, ọ kacha mma ilele vidiyo dị n'okpuru. Have nwere ya dị na Amazon Spain maka € 135.
1 Uche ederede
Ihe ngosi Logitech
Nyochaa: Luis Padilla
Nlezianya imewe na magburu onwe risịrị
Ikuku na enweghị nkwụnye (naanị nhọrọ)
Nnwere onwe nke ọnwa atọ
Nchaji USB dakọtara na MacBook ọhụrụ
Ọnụahịa dị elu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Logitech Chakwasa ihie, na ime akara gị n'ihu
Chọta ihe nkwụsi ike na jelii mmetụta na Final Cut Pro X 10.3